'Midika izany rehetra izany: Manantena i Morgan fa mety hisy fiantraikany maharitra ny fandresena amin'ny amboara eran-tany | 1xbet
Taorian’ny fampiatoana fatratra indrindra tamin’ny famaranana rehetra, izay nipoiran’ny olon’i Angletera ho mpandresy amin’ny amboara Tompondaka Erantany dia nanolotra ny fankasitrahany tamim-pankasitrahana avy amin’ireo mpanohana azy ary ny kapitenin’izy ireo, Eoin Morgan, ary nifampizara nanantena fa hisy ny vaovao.
Kivy tamin’ny champagne ny kapiteny Angletera ary mbola nifikitra tamin’ny amboara rehefa tonga teny amin’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety taorian’ny nandreseny an’i Nouvelle Zélande, ka niaiky fa io no hany fomba hinoany ny fahagagana izay niseho tao amin’ny Tompo .England nandresy tamin’ny fiadiana ny amboara eran-tany taorian’ny fifaninanana mahery vaika nanohitra an’i Nouvelle Zélande Read more
Nilaza i Morgan: “dia lalan-dàlana tena mahomby amin’ny olona rehetra amin’ny firenena sy amin’ny lafy tontolo rehetra izay nanaraka anay ary nanohana anay. Misaotra anao indrindra. Hafahafa izany.Hatramin’ny nanombohan’ilay fifaninanana, hatrany amin’ny alàlan’ny fifaninanana, na manao ahoana na manao ahoana, dia nino ny olona satria nino izahay ary tena mankasitraka an’io aho ary salama ihany koa ny olona rehetra. ”
ny mahazatra dia ny lalao iraisam-pirenena voalohany naseho tamin’ny fahitalavitra terestrialy tany UK nanomboka tamin’ny taona 2005 tamin’ny Ashes, izay nanaiky ny zon’ny mpamorona ny zon’ny Sky hizara ny fahitalavitra amin’ny Channel 4, midika izany fa mety ho tratra ny mpanatrika an-tapitrisany.
Miaraka amin’i Ben Stokes ilay kintana tamin’ny andro – nanangana ny kofehy voalohany ny 84 tsy naharesy azy, alohan’ny hanampiany ny isa 15 no nihazakazaka be indrindra – Te-hanao tsirambina toa izao i Andrew Flintoff. firenena 14 taona lasa izay.Play Lahatsary 2:11 Ny dian’ny ‘rollercoaster’ tany Angletera ho an’ny voninahitry ny fiadiana ny amboara eran-tany any Cricket – video
Ny eritreritra toy izany dia manamarika fiovana lehibe ho an’ny Stokes.Tsy vitan’ny hoe nihemotra tamin’ny faha-30 taonan’ny faran’izao tontolo izao tamin’ny taonjato faha-20 tamin’ny taona 2016 ny 28 taona – nitazona azy ho an’ny enina mirahalahy nifanesy izy tamin’ny farany taorian’ny nisamboran’ny West Indies ny anaram-boninahitra tamin’ny famindram-pon’i Angletera – efa nanipy ny tenany ihany koa izy. ny cricket niaraka tamin’ny zotom-po vaovao taorian’ilay tranga Bristol 2017 voarakitra tsara.
Hoy Morgan: “Mahagaga ny mandalo azy. Saika mahery noho ny olombelona izy. Izy tokoa no nitondra ny ekipa sy ny batter-mihetsika. Ny habakabaka, ny fihetseham-po izay nandeha tamin’ilay lalao rehetra, dia nahavita niatrika izany tamin’ny fomba tena iainana izy. Ary mazava ho azy fa izay rehetra mijery ao an-trano dia manantena ny hanandrana ary ho Benny Stokes.England handresy amin’ny lalao Cricket World Cup farany taorian’ny tantara an-tsehatra super-nanoherana an’i New Zealand – fanehoan-kevitra mivantana!Mamaky misimisy ihany
“Heveriko fa be dia be ny fikarakarana nifarana taorian’ny nitranga tany Kolkata. I Ben amin’ny fotoana maro dia nijoro tsirairay sy ho antsika. Izy no mitarika ny lalana amin’ny fanazaran-tena, ao amin’ireo fivoriana ekipa misy antsika, ary mpiady mahery izy. Ary anio dia manana andro be izy anio ary mazava ho azy fa mankasitraka an’izany izahay. ” ve tena nanohana ahy foana. Niala-tany sy nisosa ny lalao.Manantena aho fa nanome aingam-panahy ny olona te-hanao izany amin’ny ho avy isika. ” tamin’ny amboara eran-tany 2015 ka hatrany an-tampon’ny laharana, nisy izao lasa lasa vatosoa volafotsy manerantany indrindra. Nizara ny famihina aorian ‘ny famaranana ny famaranana ny Twitter Twitter Pinterest Ben Stokes sy i Eoin Morgan. Saripika: Matt Dunham / AP
Dimy 32, dia misy fisalasalana mazava momba ny hanohizan’i Morgan mandroso amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany 2023 any India. Ilay fiadiana ny amboara eran-tany faharoa ambin’ny folo20 izay natao tany Aostralia tamin’ny herintaona, fa hotazonina mandritra ny fotoana kelikely ihany ny eritreritra toy izany. araka izay azontsika atao. Mihevitra aho fa mendrika izany. Ary dia hijery zavatra isika.Efa-taona izay dia maharitra ela.
Mivoatra haingana be ry zareo ireo. Moa ve aho afaka mitazona azy ireo? ”Talohan’ny nidiran’izy ireo, niaraka tamin’ny fihoaram-pefy be dia be, nanangona ny mpilalao azy ho fihodinam-bazaha izy, na dia teo aza ny fanerena mafy teo amin’ny fotoana, dia nahita vazivazy nikoropaka izy ary nitsiky. Andy Bull Read more
Mazava ho azy ny zava-nitranga kely tany Angletera, avy tany Stokes no tratra tao anaty lalina niaraka tamin’ny baolina 15 tamin’ny ambiny voalohany – ho an’i Trent Boult ihany no mamakivaky ny tady – na ireo fianjerana efatra ao amin’ny faran’izay farany, taorian’ireo fihazakazahana roa, dia nitodika amina sivy ka hatramin’ny telo avy roa. : “Nomba anay koa i Allah. Niresaka tamin’i Adil Rashid aho, hoy izy fa miaraka amintsika tokoa i Allah. Nilaza aho fa teo am-bavany ny maintso.Izany dia manome endrika ny ekipantsika. Avy amin’ny fiaviana sy kolontsaina samihafa izahay ary mihalehibe any amin’ny firenena samihafa ny lehilahy. Ny tena mahita ny hatsikana amin’ny toe-javatra iainantsika indraindray dia mahafinaritra. ” finalist tamin’ny taona 2015, nahafinaritra tokoa tamin’ny farany, nanaiky ny lalàna mifehy ny fatorana izay nanasaraka ny andaniny roa. Nametraka asa be dia be tokoa ry zalahy raha te-hiatrika eto ary hilalao amin’ny famaranana hafa amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany. Nandritra ity fanentanana ity dia niresaka momba ny tsy voafehy aho ary misy mpivady sarotra atelina.Na ny lafiny iray dia hahatsapa soa ihany taorian’ny fatorana tamin’ny fotoana mahazatra ary iray hafa tao amin’ny Super Over. Iray amin’ireny, eh? ”The Spin: misoratra anarana ary alao ny mailaka cricket isan-kerinandro.